Ndinogona atore chikwereti kuvaka imba?
Haasi munhu wose ane zvinhu kutenga zvivako. Mazuvano iripo chikwereti pakuvaka imba. Kazhinji, mari zvikoro kupa zvikwereti zvakadaro nezvokudzivirirwa nyika kana zvimwe pfuma. Izvi vanofanira kuti kuderedza chikwereti ngozi.
Kuti inotiratidza womunhu anomukweretesa?
Banks kumanikidza nhamba zvinodiwa kuti yakatengwa zvinhu zviri pasi kuvakwa zvivako uye nenyika. Pano vari:
Vehicles inofanira vakanyorwa panguva BTI, inofanira kunyorwa kunyoresa basa sechinhu konekwa kuvakwa. Muchiitiko chino, zviri chinodiwa kuti imba kare hafu kuvakwa. zvokufambisa All zvakakodzera zvizere kugara, achava neimba kupfuura womunhu anomukweretesa. Nyika iyo pfuma yakavakirwa, hazvifaniri kurenda. Nepo kuvakwa hakusi wakakwana, musapfuura zvose zvakafanira nzendo hurumende basa, mutengi vachafanira kubhadhara soro kufarira prices.
Chimwe chinodiwa kuti munhu akakweretesa kana kushandisa kuti chikwereti pakuvaka dzimba akapa kuti munda. Anofanira kuva pachake, zvakakosha kushongedzera pamwe zvakafanira kukurukurirana unoburuswa kodzero pasi nayo. Banks kazhinji kusarudza apo nyika iri.
Credit pakuvaka imba kupa mabhanga shoma. Zvisinei, mumakore achangopfuura, chidimbu ichi anotanga kuudza. Suburban Real Estate musika rakanyatsojeka nevakawanda pakati vatengi. Uye kudiwa, zvinobatsira kuti kuzvarwa pfungwa. Usati unogona kushandisa chikwereti zvakadaro, unofanira kuyera danho ose. Verengai wokutanga muripo rinowanzova kupfuura vari kwakajairika chikwereti, hazvisi asingasviki 30%. Zvakakosha kuziva pakarepo pamusoro makomisheni. Credit pakuvaka imba kunogona kugovera zvakasiyana kwenguva (kubvira 3 kusvika 30 years). Kubva ichi, uyewo pamusoro kukura chikwereti kunobva chimbadzo.
The pamazita magwaro zvaunofanira atore chikwereti kuvaka imba:
An mari mutsara anokwereta, achisimbisa solvency kwayo.
Paper iri munda.
Mvumo kuvaka chinhu.
Other mapepa kuti vanoda chaizvo zvemari uye zvikwereti sangano kuti ape chikwereti.
mabhanga siyana kupa zvikwereti zvavo kuvaka imba. Sberbank Somuenzaniso, inozivikanwa dzinonakidza chirongwa, pasi iro rinopa zvikwereti kuvanhu kutenga imba. Somunhu rubatso iye anoona kuchanzi kana kugara. Kune miviri nzira:
The anokwereta anoita panze chikwereti kuti pavakwe private imba, iyo iri vimbiso iri kutengeserana uku.
The yeGmail.END_STRONG anotora mari richengetwe vamwe Real Estate, iyo yakavakwa ambotaurwa uye muridzi. In chikwereti ichi aida chinangwa - kuvaka dzimba (dzinogarwa).
The chirongwa mubvunzo anonzi mumari Bank "Kuvaka chivako chokugara," zviri vakasiyana chirongwa "pasi kuvakwa kwedzimba" kufarira yepamusorosoro. Chirongwa anopa chikwereti kuti imba wechigarire dzokugara. Kuti bhanga anogona kuona hurongwa, kupa mbiri kana kwete, akakumbirwa kuratidza magwaro pamusoro panzvimbo, yakanga kiyi. Iyewo anoda bepa kutenga dzimba. Kufarira achaenderana izwi iri chikwereti, kukosha kuripwa rokutanga chikwereti mari. A guru plus kana nemhosva iri rakapa Sberbank muhoro.
Edza kusarudza zvakanaka pamahombekombe, teererai nechimwe chinhu kwemutongo chibvumirano, kuti mutoro kusvika nenhau chikwereti kuvaka imba.
Ndinoda chikwereti? Agricultural Bank achapa ayo
Kadhi MTS - vanozvishandisa wongororo.
Chakaipira Credit nokuda kickbacks
Sei kusarudza kubhengi nani kutora chikwereti
Zvinoita kunyora kure chepamutemo chikwereti chikwereti?
Hotels muMoscow panguva kwevhiki: mapikicha uye wongororo
Gold BMW H5M Eric Davidovicha: nokurondedzerwa uye zvaidiwa motokari
Kuvimba mari - chii ichi?
Nzeve kubva musoro nomuswe Rainbow - resipi chete mapikicha
Simba paMiner ("Dota 2"): unyanzvi
Detailed characterization pakati magamba "nhamo kubva zvaiti" - A. Griboyedov Comedy
Handizivi kuti kutsvoda kwezviratidzo zvenyeredzi?
Tracheitis: chii uye sei kurapa nayo?
Pear Yakovlevskaya: rondedzero siyana, kudyara, kurima, wongororo
Oregano. Imhandoi zvinonhuhwirira?
Tricolor TV: configuration, chokugadza kushandisa
Molodogvardeets Zemnuhov Ivan Aleksandrovich: Biography, mibayiro